Dowlada Qatar oo ka hadashay qoraalkii ka soo baxay Wargeyska the Newyork times – Walaal24 Newss
Dowlada Qatar oo ka hadashay qoraalkii ka soo baxay Wargeyska the Newyork times
July 24, 2019	Off	By walaal24
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Warfaafinta ee dowladda Qatar ayaa looga hadlay warbixintii uu daabacay wargeyska the Newyork times,iyadoo dowladda Qatar arrinkaasi ay siweyn uga jawaabtay.
“Dowladda Qatar markasta waxaa ay ku dhisantahay siyaasadeeda arrimaha dibadda in la abuuro jawi degnaansho iyo barwaaqo horseedidi,mana faragelino madaxbanaanida iyo arrimaha gudaha ee dal kale,cidkasta oo sidaasi ku fekereysana nagama mid ahan dowlada haan Qatar” ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay dowladda Qatar.
“Khalifa al Muhannadi ma ahan mana noqon doono qof lataliye ah kana tirsan dowladda Qatar,ma matalo dowladda Qatar,xaqna uma lahan in uu ka hadlo arrimaha masiiriga ah ee dalka Qatar,waanu baari doonaa shaaqsiyada qofkaasi,waxaana uu qaadi doonaa mas’uuliyada hadalkaasi uu yiri,waana ku celinaynaa in uusan marnaba matalin mabaadi,deena”.
“Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan,mana faragelino arrimahooda gudaha,xiriirkeeni wuxuu ku dhisan yahay isxushmeynta labada dhinaca iyo ilaalinta danaha labada dal,waxaan u rajeynaynaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyed horumar iyo barwaaqo,waaa sii wadi doonaa dadaalka aan ku taageerayno Soomaaliya,ilaa dalka uu gaaro xasilooni waarta.”
Waxaa warbixintasi looga codsaday mas’uuliyinta wargeyska newyork times in wareysigaasi ay duubeen baaritaana lagu sameynayo ay kaalin ka qaataan,iyadoo loo marayo shuruucda iyo nidaamka u yaala siyaasadooda xaga Tifaftirka.
Dhanka kale Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay arrintani wuxuuna sheegay in safiirka Qatar ee Soomaaliya uu la wadaagay Dowladda Soomaaliya warbixinta la xiriirta Newyork Times iyo eedeymahaasi,wuxuuna wasiir cawad uu xusay in warbixintoodi ay ku adkeynayaan Qatar in aanay waxba kajirin warkaasi la baahiyay,sidoo kale Qatar ay u xaqiijisay in arrintaasi baaritaano dhab ah ay ku sameynayaan.
Wasaaradda Waxbarashada Somalia oo soo bandhigtay Natiijada Imtixaanka dugsiyada Sare
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS oo Casho Sharaf sagootin ah loogu sameeyay Baydhabo
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaliya oo Xalay kormeeray Wasaaradda Shaqada
Ciidanka Xoogga Dalka oo gacanta ku soo dhigay Askari dil ka gaystay Baladweyne oo baxsad ahaa
Ciidamada Hirshabeelle oo soo saaray miino lagu aasay wadada u dhexeysa Baladweyne iyo Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif
Heshiis dhex maray beelo ku dagaallamay Degmada Ceel-Berde ee Gobolka Bakool
Wafdi ka socda Dowlada Qatar oo gaaray magaalada Dhuusamareeb Caasimada Galmudug
Dhageyso: Ra’Qiisul Wasaare Kheyre oo magacaabay guddi heer Qaran ah Aaska Wasiir Xoosh
Daawo: Maxkamadda Ciidamada Darajada 1aad oo xukun ku riday rag ka tirsanaa Kooxda Daacish
Daawo: Gudoomiyaha Golaha Guurtida oo ka jawaabayay Madaxweyne Farmaajo baqii ugu baqayay in la joojiyo dagalka u dhaxeeya Soomaliland iyo Puntland
Daawo: Madaxweyne Mustafe oo kulan xaasaasi ah la qaatay ciidamada gaarka ah ee liyu police